Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Manapoaka ny tanànan'i Sri Lankan ny fipoahana rehefa mihaza ireo mpampihorohoro silamo ao ambadiky ny fanapoahana baomba ny paska
Fipoahana telo no voalaza fa nanetsiketsika tanàna iray teo amoron-dranomasina atsinanan'i Sri Lanka raha nanao fikarohana ny polisy sy ny tafika tamin'ny famonoana olona maty tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo.
Tonga teny an-tanànan'i Kalmunai ireo fipoahana ireo satria notafihin'ny Tafika sy ny Vondron'asa misahana ny polisy manokana ny fanafihana, hoy ny fampahalalam-baovao Sri Lankan News First. Tsy mbola nisy ny tatitra momba ny maty.
Nisy ny fifampitifirana talohan'izay rehefa nanandrana nanafika toerana iray ny polisy izay inoana fa nampiasaina tamin'ny fanamboarana akanjo famonoan-tena.
Nanao fikarohana manerana an'i Sri Lanka ny polisy taorian'ilay daroka baomba nahafaty olona tao am-piangonana sy hotely nahafaty olona 250 mahery. Ny State Islamic (IS, ISIS teo aloha) dia nilaza fa tompon'antoka tamin'ny baomba.
Miaramila efa ho 10,000 70 no naparitaka nanerana ny firenena nanao fikarohana sy nanome fiarovana ny foibem-pinoana, hoy ny mpitondra tenin'ny tafika. Notazomin'ny polisy mihoatra ny XNUMX ny olona ao anatin'izany ny teratany vahiny avy any Syria sy Egypte.